Asia munaFebruary: Kwokuenda Kwakanaka Mamiriro Okunze
Asia muna February
Kwokuenda Muna February, Festivals, uye Weather
Kufamba Asia muFebruary kwakanaka, tichifunga kuti iwe unogara pedyo nechepamusoro pegungwa kana munzvimbo dzinotyisa, uko kutonhora kunodziya. February ndiyo mwedzi unoyevedza kuti uwane ruzivo rwekunaya kunotyisa muSouth-Asia asi dzimwe nzvimbo dzinotonhora. Thailand uye nyika dzakapoteredza dzichange dzichifarira nhepfenyuro yemwaka wakaoma .
Apo nguva yechando ichiri kubatisisa muNorth Hemisphere, mamiriro okunze kuSouth-East Asia akanaka; monsoon season inenge yava chiyeuchidzo kubva munaOctober.
Mazuva ari kupisa, asi kwete sekupisa kusvikira hunyoro hunyoro husvika muna March uye huchakwira muna April.
Asi kwete yose yeAsia inotyisa munaFebruary . Zvizhinji zveEast East Asia (China, Japan, Korea, uye vavakidzani) inotonhorera uye ichine mvere kusvikira gore rasvika rinopedza zvinhu .
Mutambo Idzva Wemunyika (unosanganisira Gore Idzva reChinese uye Tet Vietnamese) dzimwe nguva inoitika munaFebruary - inochinja kuchinja gore negore. Kana kupemberera kwemazuva 15 kunopera muna February, nzvimbo dzakawanda dzekuenda kuAsia dzinotarisana nevaya vanofamba panguva iyo kure nemabasa.
Asia Zviitiko uye Mhemberero muna February
Zviitiko zvizhinji muAsia zvakarongedzwa kumativi ezviitiko zvegore kana kuti kuvimba pamagetsi ezuva, zvichiita kuti mazuva acho akasiyana gore negore. Izvi zviitiko zvechando nemhemberero zvinogona kuitika mumwedzi waFebruary:
Vietnamese Tet: (January kana February; kazhinji inowirirana neChitamende Itsva). Iwe uchada kuronga mberi kana uchifamba muVietnam; nyika yepamusoro yezororo yenyika inonyanya kukanganisa zvinhu. Tet inguva inofadza chaizvo yekuve muVietnam, asi inonyanya kukosha.
Setsubun: (mazuva anosiyana pakati pematunhu, asi kazhinji February 3 kana 4) Mutambo unoshamisa wekuJapan wekutsvaira chibage unoratidza mararamiro emutambo wegore. Nhawani, uye dzimwe nguva mari kana mashizha, anokandwa kuti abvise mweya yakaipa uye vanofarira vataridzi.
Thaipusam: (mazuva anosiyana; imwe nguva munaJanuary kana February) Hondo yeHindu yeThaipusam inowira munaJanuary kana kutanga kwaFebruary. Mhemberero dzekufembera - uye dzimwe dzakatarisana nekuputika - dzinoitika muIndia, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, uye chero imwe nzvimbo inenge ine vanhu vakawanda veTamil. Iva Batu Caves pedyo neKuala Lumpur kuMalaysia inoita imwe yemhemberero huru.
Carnival: (February) Chiitiko chechiKristu cheCarnival - chinopembererwa seMardis Gras muUnited States - haisi kuonekwa nguva dzose muAsia. Mhemberero nemapuranga dzimwe nguva zvinoshandiswa mune nzvimbo apo chiKristu chakatorwa nevakoroni. Carnival yakaendeswa kuna Goa muIndia nevatongi vePortugal; mapoka makuru uye mijenya yemafaro emitambo inoitwa musi weFebruary. Uye zvakare, nguva dzose pane nguva muGaa! Zvinoshamisa ndezvokuti, Philippines - nyika yeAsia yakanyanya yeKaturike - haiwanzo kuongorora Carnival nenzira inowanzoitika. Vane shanduro yavo pachavo yakakamurwa kuva mitambo yakasiyana iyo inowanzoitika munaJanuary.
Full Moon Party: Thailand yakakurumbira yakazara Moon Party pachiwi cheKa Koh Phangan ichave ichivhuvhuta muna February se makumi ezviuru zvevatariri vanoenda ikoko. February kazhinji anoona imwe yemapato makuru emwaka. Chiitiko chacho chakura zvakakura zvokuti zvinogona kuchinja kubuda kwevachengeti muThailand ! Inoenda kumucheto yakadai seChiang Mai ichave yakanyarara, zvakadaro, zvitsuwa paGulf (kumabvazuva) kweThailand zvichave zvakabatikana kwevhiki rose yemwedzi wose.
Gore Idzva Lunar
Kazhinji inowanzonzi "Gore Idzva reChinese," Gore Idzva reLunar ndiyo inofanirwa kupemberera mutambo mukuru munyika yose.
Gore Idzva reLunar rinoitika munaJanuary kana February gore negore . Zvechokwadi chiito chacho hachina kungogumira kuChina kana kuEast Asia! Gore Idzva reChinese rinopinda kune dzimwe nzvimbo muAsia semamiriyoni eEast Asia vagari vanofamba munharaunda yacho.
Mabhizinesi mazhinji achavharwa - kana kuiswa nevashanyi - panguva yezororo remazuva 15. Kutakura kunowanikwa pasi nevanhu vari kufamba. Nzvimbo dzekugara dzinzvimbo munzvimbo dzakakurumbira dzinogona katatu panguva yeChinese Ichitsva, naizvozvo ronga saizvozvo!
Zano: Kana mapurogiramu ako eFebruary anofananidzwa, zvino ndizvo zvaunotarisira muAsia munaJanuary naMarch . Iwe unogona kunge uchida kutora nzira yako yekuona Chiitiko cheNyika Itsva yeLunar - kana kudzivisa zvachose!
Kwokuenda Muna February
February ndeimwe yemwedzi yekupedzisira yemamiriro ekushisa anonakidza usati huchipisa uye hunyoro hunovaka kumativi asingaverengeki munzvimbo zhinji yeSouth Asia.
Kupisa kunoramba kuripo kusvikira nguva yechipupuriro inopinda mukunatsa zvinhu paApril .
UNESCO World Heritage Sites dzakadai seAngkor Wat muCambodia uye vamwe vanobatikana chaizvo munaFebruary.
Kunyange zvazvo mamiriro okunze akanaka kwazvo munzvimbo dzakadai seThailand, Laos, neCambodia, February inoratidza chikwata chemazuva akaoma. Iwe unogona chaizvo chaizvo kutarisira kubhadhara mutengo wakakwana wekugara kunze kwekuti iwe unotaurirana zvakaoma kumakamuri .
Nzvimbo Iine Mamiriro Okunze Akanaka
Sri Lanka (kumaodzanyemba hafu)
Nzvimbo Iine Mamiriro Okunze Akaipisisa
Japan (inotonhora kumaodzanyemba)
Nepal (kutonhora / chando pakakwirira)
IPerhentian Islands neTioman Island kuMalaysia (mvura inonaya)
Bali, Indonesia (rain)
Zvechokwadi, iwe unogona kugara uchiwana nzvimbo inofadza kuenda kune dzose, zvisinei pasinei nemwaka. Nharaunda yekumaodzanyemba muNorth Hemisphere pamakona ekudzikisa ichashisa munaFebruary. Kunyange nyika dzakadai seIndonesia dzichave dzichine nguva yemwedzi muFebruary, ichava nemazuva ezuva kuti ifare.
February ndiyo mwedzi wakakwana wokushanyira Rajasthan - nyika yeJapan yegwagwa - kutonhora kusati kwakura kunopisa. Vatashanyi, vose veIndia nekunze, vanoenda kumhenderekedzo dzekumaodzanyemba dzakadai seGoa. Nekunyanya kudonha mumvura munaFebruary, nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweIndia zvakare dzakakosha kushanyira.
Inoenda kuNorth India yakadai seManali , Mcleod Ganj , uye kune vamwe pedyo neHimalaya ichave yakafukidzwa nechando.
Kunyange zvazvo chando mumakomo chiri chinyararire, migwagwa yakawanda inopera. Gomo refu rakapfuura rinowanzovhara nekuda kweshizha uye mashizha ematombo. Kutakura kunogona kunonoka kwevhiki.
Nemhaka yenzvimbo yaro yekumaodzanyemba nekuswedera pedyo neStatra, Singapore inowanzosangana nemamiriro okunze mumamiriro egore rose : kushambidzika pamwe nenguva inonaya kuitira kuti mbeu dzichikure. Hungu, Singapore ine nzvimbo yakawanda yegreenspace kuenzanisa konkrete!
February kazhinji anounza mvura shoma shoma kudarika December kana January, kunyange zvazvo mvura inogara ichizara. Nenhamo, pane zvakawanda zvokufarira mukati medu muSingapore paunenge wakamirira kunze kwemvura. Uye kutakura amburera, mvura kana kupenya, ndicho chinhu chinofanira kuitwa muSingapore!
Mungozi dzeOrangutans dziri kuSouth-Asia
Mhuka dzeSouth Asia yekuMabvazuva: Bata neKuchengeta!
10 Zvikanganiso Zvokudzivisa Pamba Rako Rokutanga
Squat Toilets muAsia
Kutungamira kuSinulog muCebu, Philippines
Mabasa Eight Anoshamisa muBoracay
IWestest Restaurant Row muNew Orleans Freret Street
Bhuku Rakafukidzirwa Rakanaka muNorth Jersey
Oasis yeMakungwa eCheis Cruise Ship Interiors
Ndekupi Kwaungawana Mazano Akanakisisa eToronto
Zvaunoda Kuziva NezveJetBlue's Frequent Flyer Program
Haunted Graveyard is Connecticut's Greatest Halloween Attraction
Sleepovers paAmerican Museum of Natural History
Sayenzi yevana Kubva ku UK
Iyi Genius Stargazing App ichachinja maonero aunoona usiku
Mune Manzvimbo Makakurumbira muBrazil